सेल्फ केयर « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
हेल्दी, स्फूर्त, चम्किलो अनुहारका लागि टमाटर, शखरखण्ड, बेरिज, सनफ्लावर सीड्स, ब्रोकाउली, पालंगो, गाजर, लो फ्याट डेरी प्रोडक्स, ओखर, सुन्तला, बन्दाकोभी, अन्डा, ग्रीन—टी, केरा आदि महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले आफ्नो दैनिक
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । सुख्खा फलमा समावेश किसमिस अङ्गुरलाई सुकाएर तयार गरिन्छ । यसमा अङ्गुरको सबै गुण पाईन्छ । किसमिसको प्रयोग हाम्रो स्वास्थ्यको लागि धेरै फाईदाजनक छ । किसमिसमा आइरन,
मोटोपनाबाट आजिवन सुरक्षित रहन र कम समयमा मोटोपन घटाउन पूर्ण निर्देशनको आवश्यकता पर्छ । मोटोपनाबाट सुरक्षित रहने र यसबाट मुक्ति पाउने के के उपाय छन् ? आत्म मन्थन म मोटोपनाबाट
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमार्डाैँ । सहरी जीवन, धुलो–धुवाँसँग जुध्नु हाम्रो दैनिकी ! यस्तो वातावरण प्रदूषणका बीच छालाको स्याहार गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यसर्थ, छालाको चमक बचाइराख्न मेकअप गरेर मात्र हुँदैन
आज शनिबार । मानिसहरु आज बिदा त हाे नि भनेर केही बढी सुत्न खाेज्छन् । तर, आवश्यकताभन्दा धेरै निदाउँदा मुटुमा समस्या बढ्न सक्ने एक अध्ययन देखाएको छ । चीनको म्याकमास्टर
यस्तो हुनुपर्छ आहार, विहार र विचार
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । मुटुका धेरैजसो रोगहरु जीवनशैलीसँग सम्बन्धित हुन्छन् । अव्यवस्थित जीवनशैलीको नतिजा हो मुटुको रोग । आधुनिक सभ्यता, व्यस्त जीवन, महत्वाकांक्ष, भोजभतेर, कम्प्युटर र टेलिभिजन, अत्यधिक मानसिक तनाव
गलत प्रकारको लिपस्टिक प्रयोगले भएको सौन्दर्यलाई समेत खुलाउँदैन । त्यसर्थ, आकर्षक लुक्स दिन महिलाले छालाको रङअनुसार सही रङको लिपस्टिक छनोट गर्नुपर्छ । त्यसैले आफ्नो छालाको रगत र रङलाई परीक्षण गरी
एक्सरसाइजले मानिसलाई स्वस्थ बनाउँछ । यसले पेट घटाउन, बढाउन, हातको मसल घटाउन–बढाउन मद्दत गर्छ । शरीरका सबै भागलाई कसरतका माध्यमले आफूले खोजेको आकारमा घटाउन/बढाउन सकिन्छ । शरीरको एक्सरसाइजमध्ये एक छाती (चेस्ट)को एक्सरसाइज पनि
सौखिन जीवनशैली, असन्तुलित खानपान र व्यायामका लागि पर्याप्त समय अभावजस्ता कुराले मानिसको तौल बढ्दो छ । आवाश्यकताभन्दा बढी तौल बढ्नुलाई चिकित्सकीय भाषामा मोटोपना भनिन्छ । मोटोपना धेरैका लागि समस्यासमेत बनेको
घरमै बसेर नङ चम्काउन यसो गर्नुहोस्
हर्बल मास्क नङमा चमक ल्याउन घरमै मास्क तयार पारी प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसका लागि एक कप तातो पानीमा सानो एक चम्चा केलमाइन र पुदिनाको पातलाई एक घन्टासम्म भिजाउनुपर्छ र